Iivampire zeHalloween | Imisebenzi yezandla ivuliwe
UAlicia tomero | 30/10/2021 17:14 | Imisebenzi yeekhadibhodi, Imisebenzi yezandla zabantwana, Imisebenzi yezandla kunye nezixhobo, Ukusetyenziswa kwakhona
Kule Halloween ungaphoswa indlela yokwenza ulonwabo iivampires ngeetshokholethi. Ungaphinda usebenzise ezinye iityhubhu zekhadibhodi, uzipeyinte zibe mnyama kwaye wenze amanxeba amancinane ngekhadibhodi ukuzenza eyoyikisayo neyoqobo. Ukuba uthanda ukuhlobisa nayiphi na ikona, le ngcamango ilungile ukukwazi ukuyibeka phezulu, nabo banokumangalisa okukhulu kubantwana.
1 Izinto endizisebenzise kwiivampires ezintathu:
Izinto endizisebenzise kwiivampires ezintathu:
Iityhubhu zekhadibhodi ezi-3 zokurisayikilishwa.
Ipeyinti emnyama ye-acrylic.
6 amehlo eplastiki.
Ikhadibhodi emnyama yamaphiko.
Ikhadi elibomvu koonxantathu abancinci.
Ikhadibhodi emnyama okanye emdaka kwiingalo ezincinci.
Izicoci zemibhobho emnyama, ebomvu okanye emdaka.
Iibhari ezincinci ezi-3 ezinomxholo weHalloween.
Sipeyinta iityhubhu nge ipeyinti ye-acrylic emnyama. Sibayeka bome ukuze babeke ngcono izixhobo zabo.
Ku ikhadi elimnyama sizoba elinye lamaphiko evampire. Singayenza ngesandla kwaye ukuze kukulinganisa sinokubeka ityhubhu ecaleni kwayo kwaye siyenze ngokomlinganiselo womzimba. Sinqumla iphiko kwaye sisebenzise njenge template ukwenza amanye amaphiko ama-5. Bonke baya kufuneka babe nethebhu encinci ukuze bakwazi ukuyibeka kamva phakathi kombhobho.
Sipeyinta malunga nesithandathu esincinci oonxantathu kwisitokhwe sekhadi elibomvu. Sazisika sazibeka ecaleni.
Ngoncedo lwe-silicone eshushu sincamathelisa amehlo eplastiki kwaye sincamathelisa i oonxantathu ababomvu abancinci ngaphezulu kwentloko, ngokungathi ziindlebe.
Senza amanxeba amabini amancinci kunye anqamlezayo emacaleni ombhobho. Siza kufaka amaphiko esiyenzile ngekhadibhodi emnyama ngokusikwa. Siyabamba abacoci bombhobho kwaye unqumle imilenze yelulwane. Siya kubanamathela kwindawo engezantsi yetyhubhu kunye ne-silicone. Iinkcukacha zale milenze kukuba kamva sinokuxhoma i-vampires phezulu kwisebe okanye into efanayo.
Sipeyinta kwikhadibhodi emnyama okanye emdaka abanye iingalo ezincinci ezintandathu kwaye sabasika. Nge-silicone sinamathela phakathi komzimba ibha yetshokolethi kwaye siyirhangqe ngeengalo ezimbini ezincinci esizinqumleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla kunye nezixhobo » Iivampire zeHalloween
Ukuthwala imisebenzi yezandla ukwenza nangaliphi na ixesha
5 toilet paper roll ikhadibhodi yezandla ukwenza ngexesha ibhulorho